Reachli: Inethiwekhi yokuThengisa ebonakalayo | Martech Zone
UReachli: Inethiwekhi yokuThengisa ebonakalayo
NgoMvulo, Februwari 25, 2013 NgoMvulo, Februwari 25, 2013 Douglas Karr
Sabelane ngezinye iinkqubo zokucebisa umxholo Outbrain. Kuthekani ukuba umxholo wakho awubhalwanga kwindalo, nangona kunjalo, kwaye ubonwa ngakumbi-njengamakhuphoni, imizobo yolwazi, iigrafiki zentengiso, ukubiza isenzo okanye iifoto? UReachli ngumnatha wentengiso obonakalayo.
UReachli ungaphezulu kwe-70,000 yabathengisi abafumana ngaphezulu kwesigidi se-3.5 sokujonga rhoqo ngenyanga! I-Reachli ine-teknoloji yokuthengisa kunye nokutshatisa isebenzisa igama eliphambili, umxholo, kunye ne-algorithms ehambelana nefoto yokubhangqa nawuphi na umfanekiso okhoyo kwiwebhu kunye neyona ntengiso ibandakanyekayo. Kwaye ukuba ungumpapashi onomdla omkhulu kwindawo yakho nakwiakhawunti yemidiya yoluntu, uReachli unokukunceda ekwenzeni imali kolo luntu.
Enkosi kwiqela elikwi-HCCMIS, a inshurensi yokuhamba inkampani, ngokukhomba indawo kum namhlanje. Iqela lokuthengisa ngaphaya lenza umsebenzi omangalisayo wokukhuthaza umxholo obonakalayo kunye nokufumana impendulo enkulu! Ngabathengisi beB2C abaphucukileyo abavavanya kwaye balinganise yonke into abayenzayo.
tags: Inethiwekhi yomthengisiinethiwekhi yentengisoUmvakalisireachliintengiso ebonakalayoUmxholo obonakalayo
IFomstack: Yongeza ifom kwiDropbox
I-RAMP: Ukuhanjiswa ngokulula kweMxholo phakathi kweeSayithi zeWordPress